၁။ အကယ်၍လူနာတစ်ဦးတစ်ယောက်က ဆေးရုံသို့အရေးပေါ်သွားရန်လိုပါက အသင်းမှ ဘတ် ၁၅၀ – ၁၀၀၀ ကူညီသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အခြေအနေအရလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ကူညီသွားမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သေ ဆုံးသူဘက်မှ အလွန်အခက်အခဲနှင့်ကြုံနေပါက အသင်းမှ အသုဘအတွက်အစအဆုံးကူညီပေးမည် ဖြစ်သည်။
This entry was posted in Uncategorized on September 25, 2013 by andamanceia.
← GLT Buddy…..We love each other. ဖန်ငါခရိုင်ရှိ PCC နှင့် CBO ဘန်နင်ယန်စာကြည့်တိုက်အသင်းတို့သည် ခိခက်ဆေးခန်းမှ အခြေခံကျန်းမာရေးပြုစု နည်း လေ့လာသင်ယူခဲ့ကြသည်။ →